IAluminiyam ngefoyile ye Catering Itreyi, IAluminiyam Oval Platter, ngefoyile yeRolls - Jiahua
Wamkelekile ku-Allwin Pakisha
Ukhuseleko kunye nokuNceda
I-Allwin Pack ibekwe e-Beijing yase-China, elishishini elibanzi lokupakisha ukutya, elikhethekileyo kwisikhongozeli se-aluminium, izikhongozeli zeplastiki, uyilo lobumbeko kunye nophuhliso, i-R & D yokuzenzekelayo, ukuthengisa kunye nenkonzo yabathengi njengenye yenkampani eDibeneyo. Isiseko sokuvelisa sika-Allwin Pack siseHebei, eTianjin, eShandong naseGuangdong, sineemitha zesikwere ezingama-30,000 zokucwangcisa ukungabinathuli, kunye nesixhobo esizenzekelayo sokubopha inkunkuma kunye nokubuyiselwa kwenkunkuma kunye nenkqubo yokurisayikilisha. ukuvavanywa kwempahla eluhlaza kunye nokuvavanywa kokusebenza kwelebhu, uyilo lobunjineli, siphuhlise kwaye savavanya phantse iwaka lomngundo oqhubekekayo njengenkokeli kolu shishino.
Sisebenzisa ubuchwephesha obungaphezulu kwama-20 obuninzi kwicandelo lokulungiswa kwefoyile ye-aluminium ukugcwalisa inani lezikhewu zetekhnoloji yeshishini
7 8 9 intshi ngeenxa zonke iPan
Aluminium Aluminium ngefoyile ye
sisebenzisa izinto ze-aluminium zefoyile ezingamazwe aphesheya jikelele, ezinobungqongileyo kunye nomgangatho ophezulu ukubonelela abathengi ngeziqulatho ezahlukeneyo zefoyile yealuminium, zoba ifoyile yealuminium ekuphekeni, ifoyile yekhaya yealuminium roll kunye nolunye uthotho lweemveliso
Isikhongozelo Oval OV460
Isikhongozelo seNtliziyo se-HT70
I-12, i-Lazy Susan Cater Itreyi ye-PZ12-C
Ikhitshi leFoyile Fender WL840-320
7 intshi Round Pan RO775F
IAluminiyam yeBarbecue Tray BBQ1990R
Wamkelekile uPhando ngo-Allwin Pack
Iminyaka eli-15 umenzi wobungcali ukuhlangabezana neemfuno zakho ezenziwe ngeemveliso zeAluminiyam zeFoyile, ISAMPULA YASIMAHLA yovavanyo
Kutheni abantu abaninzi bekhetha isitya sefoyile yealuminium kunesikhongozeli seplastiki?
Ifoyile yeAluminiyam yenziwe nge-alloyum alloy yendalo emva kweenkqubo ezininzi zokuziqengqa, ngokwayo ngaphandle kwesinyithi esinzima kunye nezinye izinto eziyingozi. Nxibelelana no ...
Zonke iintlobo zeenkcukacha, zingenziwa ngokwezifiso ngokwemfuno zabathengi. Ubungakanani kunye nobunzulu banokukhetha-ukukwazi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. 2. Isikhongozeli sebakala lokutya esivunyiweyo yi-FDA kunye neKOSHER. Ukhuseleko kunye nempilo, ngokusebenzisa inzalo kumaqondo obushushu aphezulu. Njengoko kufanelekile ukunxibelelana ne ...
Ewe, akukho ngxaki. Qiniseka ukuba isikhongozeli sivulekile, sithintele ukwanda kobushushu kunye nekhontrakthi ebandayo ibangela uqhushumbo, sukusebenzisa izinto eziqhelekileyo njengezinto ezikwi-oveni ye-microwave, kungcono usebenzise iphakheji yokumelana nobushushu. 1, thintela ukwenza unxibelelwano lwefilimu kunye nokutya: xa usebenzisa ifilimu entsha, kwindawo yokufudumeza ...